Ngaphambi kokuba uMphefumlo ubone, imvisiswano engaphakathi kufuneka ifunyanwe, kwaye amehlo enyama enziwe angaboni kuyo yonke inkohliso.
Umhlaba, Disciple, yiholo yentlungu, apho ibekwe khona ecaleni kwendlela yokuvavanywa, imigibe yokubambisa i-Ego yakho ngenkohliso ebizwa ngokuba yi "Great Heresy (Ukwahlukana.")
—Indlela yokuthi cwaka.
Vol. 1 FEBRUWARI, 1905. 5
UMphefumlo ngumbhambathisi kanaphakade, ususela kwixesha elidlulileyo langaphambili, nangaphaya, ukuya kwikamva lokungafi. Ekuwazini kwakhe ngokupheleleyo umphefumlo uhlala uhleli, ungaguquki, ungonaphakade.
Ukunqwenela ukubamba umphefumlo kwizizinda zayo, indalo ibonelele undwendwe lwayo olungafiyo izambatho ezahlukeneyo ezahluka-hlukeneyo athe waziqokelelela ukuba zibumbanye. Kungenxa yalo mzimba ukuba indalo inikwe amandla okuphosa ubungangamsha bayo phezu komphefumlo kunye nokuthoba ukuqonda. Iimpawu zengqondo yimigca yomlingo esebenzayo.
Isidenge sisiphumlisi somlingo esikhutshwa kwindalo malunga nomphefumlo. Ukugrumba kubangela ukuphambanisa iiphantom ezinemibala emininzi ukuba zitsale, iithoni ezibonakala ngathi zihleli kakuhle, umoya onephunga elimnandi lokutshiza, ubangela ubumnandi obunokwanelisa iminqweno kunye nokukhuthaza incasa, kunye nokuthambisa okuchukumisayo okuqala kwegazi ligungqa emzimbeni kwaye yonwabisa ingqondo.
Ngokwemvelo umphefumlo uqhutywa njani. Ubanjiswa ngokulula njani. Hayi indlela engenatyala. Iphepha lewebhu lezinto ezingezizo liba lula njani. Indalo iyazi kakuhle ukubamba iindwendwe zayo. Xa enye yokudlala iyeka ukuhlekisa, enye icetyiswa ngobuqili apho umphefumlo ukhokelela khona ngokunzulu kwizilo zobomi. Iyaqhubeka impikiswano, ukuhlala kwaye isonwabisa kumjikelo wotshintsho oluqhubekayo, kwaye libala isidima kunye namandla wobukho bayo kunye nokulula kobukho bayo.
Ngelixa uvalelwe emzimbeni umphefumlo kancinci uvusa amandla okuziqonda. Ukuqonda ukuba ibiphantsi kopelo lwe-enchantress, ukuxabisa amandla e-wands kunye nokuqonda uyilo kunye neendlela zakhe, umphefumlo unikwe amandla wokulungiselela nxamnye nokuphelisa izixhobo zakhe. Iyazitshisa kwaye ikhuseleke kumlingo we-wands.
I-talisman yomphefumlo eya kuphelisa ukupela kwe-enchantress kukuqonda ukuba naphi na okanye phantsi kwayo nayiphi na imeko, Ihlala isigxina, ingaguquki, ingafi, ngenxa yoko ayinakuboshwa, yenzakalise, okanye itshabalalise.
Ubukhazikhazi beway yokuchukumisa kukuziva. Yeyokuqala neyokugqibela ekufuneka yoyisiwe. Ingenisa umphefumlo phantsi koxinzelelo lwazo zonke iimvakalelo. Ukuvuleka okusebenzayo kuyo indalo kulusu kunye nawo onke amalungu omzimba. Le ngcaciso ineengcambu zayo ehleli ngaphakathi ngokunzulu kwimfihlakalo yesini. Kumfanekiso omangalisayo weLaocoon, uPhidias uye wafanekisa umphefumlo ozabalaza kumalahle wenyoka oye waphoswa lupela lwendlu. Ngokujonga ngokuqinileyo kwi-talisman inyoka iqala ukungasebenzi.
Enye yeendlela i-enchantress ebambisa ngayo lulwimi, inkanuko kunye neenkanuko zomzimba, ezingena phantsi kopelo lwe-wand of flavour. Ngokujonga i-talisman umphefumlo wenza umzimba ukhusele kukunxila kokungcamla, kwaye ivumela kuphela into egcina umzimba usempilweni kwaye yanele kwiimfuno zayo. I-wand ye-flavour ke ilahlekelwe bubukhazikhazi bayo kwaye nomzimba ufumana oko kondla okunikwa incasa yangaphakathi kuphela.
Ngokusebenzisa ubugqi bevumba indalo ichaphazela umphefumlo ngokudibana nephunga, kwaye ke ezihamba ngengqondo zivumele ezinye iimvakalelo ukuba zibambe ingqondo. Kodwa ngokujonga i-talisman impembelelo yesipeliti yaphukile kwaye endaweni yomntu ochatshazelwa livumba lendalo, umphefumlo wobomi uyatsalwa.
Ngeendlebe umphefumlo uyachaphazeleka yingqondo yesandi. Xa indalo iyisebenzisa le wand umphefumlo unomdla kwaye ibhaptizwe de kubonwe i-talisman. Ke umculo wehlabathi ulahlekelwa ngumtsalane. Xa umphefumlo umamela ukuvumelana kwentshukumo yayo yonke eminye ingxolo iba yingxolo kwaye ubugqi bommandla wendalo buqhawuka ngonaphakade.
Ngaphezulu kwamehlo endalo iphosa ubungangamsha ngokuchukumisa kwe-wand yokubonwayo. Kodwa ngumbono ozinzileyo kwinkangeleko yobuso iyanyamalala, kwaye imibala kunye neefom zibe yintsingiselo apho umbono womphefumlo ubonwa khona. Xa umphefumlo uqonda ukubonakalisa kwayo ebusweni kunye nobunzulu bendalo icinga ngobuhle bokwenyani kwaye inikwe amandla amatsha.
Ukuxabana kwe-wands ukusuka kwindalo kuzisa emphefumlweni ezinye ii-wands ezimbini: ukwazi ubudlelwane bezinto zonke, kunye nokwazi ukuba zonke izinto zinye. Ngala wands umphefumlo ugqibezela uhambo lwawo. Ayisiyonjongo yokujonga izinto ezifihlakeleyo zobomi ukuba zenziwe ngenjongo yokuqonda ubuqhetseba kunye nobungangamsha behlabathi. Ukuba yonke le nto ibinokubonwa njengomphunga kwaye ubumnyama bebungenakunyanzeliswa ngenene.
Kuyimfuneko ukuba umntu okhangela okwenyani aqale angoneliseki kuyo yonke into engeyiyo eyokwenene, kuba xa umphefumlo ukufumanisa okwenene ebomini kufuneka ukwazi ukwahlula into engeyiyo.
Xa ingqondo itshatile kwaye ilawulwa yintshukumo yeengqondo, ubukhazikhazi buveliswa kwaye amandla omphefumlo ayakhutshwa. Yiyo ke le into yokuba nenze izinto ezimbi: ingqumbo, intiyo, umona, ikratshi, ikratshi, ukubawa, inkanuko.
Ubomi obuqhelekileyo bomntu luthotho lwezinto ezothusayo ukusuka ebuntwaneni ukuya kubudala obudala. Ngothuselo ngalunye isigqubuthelo sobukhazikhazi sijijelwe kwaye siphinywe. Okomzuzwana inyani iyabonakala. Kodwa ayinyamezeleki. Inkungu iphinda ivalwe ngaphakathi. Kwaye iyamangaza, ezi zinto zothusayo kwangaxeshanye zenziwe zanyamezeleka yintlungu kunye nolonwabo oluvelisayo. Isidumbu siqhubeka ukuntywila kumjelo wexesha, sithwelwe ngapha nangapha, sijikeleziswa sisigcini sengcinga, sityabeka ematyeni wentlekele okanye sitshitshiswe lusizi kunye nokuphelelwa lithemba, ukuvuka kwakhona sithwelwe ngumsi wokufa sisiya ku ulwandle olungaziwayo, ngaphaya kwawo, zonke izinto ezizalelwayo. Ngokuphindaphindiweyo umphefumlo ujikelezwa bubomi.
Umzimba ngeentsuku zakudala wamkelwa njengo-kutyhila iimfihlakalo zeli lizwe linikezelwe. Into yobomi yayikukuqonda kunye nokuqonda isityhilelo ngasinye ngokulandelelana: Ukutshabalalisa ubungangamsha be-enchantress ngokwazi komphefumlo: ukwenza umsebenzi okwangoku, ukuze umphefumlo uqhubeke kuhambo lwawo. Ngolu lwazi umphefumlo unokwazi ukuzola noxolo kwihlabathi eliqaqambileyo.